Kabtan Irene Koki Mutungi, oo sidoo kale loo yaqaan Koki Mutungi, ayaa ah duuliye xirfadeed ku leh Kenya, dhaqaalaha ugu weyn ee Bulshada Bariga Afrika. Waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee ka dhacda qaaradda Afrika ee duuleysa Boeing 787 Dreamliner. Waxay u shaqeysaa Kenya Airways, xamuulka qaran ee Kenya
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 10, 2018 00: 27 No Comments
Waxay ku dhalatay 1976 waalidiinta reer Kenya. Aabaheed wuxuu duuliye diyaaradeed ka ahaa Kenya Airways. Wuxuu tan iyo howlgab noqday lataliyihii duulista. Koki wuxuu dhigtaa Iskuulka Gabdhaha Moi ee Nairobi. Dugsiga sare ka dib 1992, markay ahayd 17 jir, waxay iska diiwaangelisay iskuulkii duulimaadka ee Nairobi Airport ee Wilson Airport, halkaas oo ay ku heshay laysankeeda tijaabada ah. Waxay sii wadday tababarkeedii tijaabada ah ee Oklahoma City ee dalka Mareykanka, halkaas oo ay ka heshay ruqsad duulimaad diyaaradeed ganacsi, oo ay soo saartay maamulka Duulista Hawada ee Federaalka.
Waxay ku soo noqotay Kenya 1995, waxaana shaqaalaysiisay Kenya Airways, halkaas oo ay ku hadhay haweeneyda kaliya ee duuliye ah lix sano. Sannadkii 2004, waxay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee Afrikaan ah oo loo aqoonsaday inay duulaan diyaarad ganacsi, markii loo aqoonsaday inay tahay hoggaanka duullimaadka ee Boeing 7374. Waxay markii dambe la caddeeyay inay duullimaadyada Boeing 767 ka duushay.
Waxay markaa raacday tababarka la qabsiga taas oo u sahashay inay u gudubto wareejinta taliyaha Boeing 787 Dreamliner. Shirkadda Kenya Airways ayaa tan iyo markii u dalacsiisay Taliyaha Guutada B787, iyada oo ka dhigaysa haweeneydii ugu horreysay ee Afrikaan ah ee qabata doorkan adduunka.
Ujeedada uu u leeyahay inuu noqdo duuliye waxaa la sameeyay intii uu caruurnimada ahaa, isaga oo u kuurgalay aabihiis, wakhtigaas oo ahaa pilot loo yaqaan Kenya Airways. Taliye Mutungi, oo leh wiil, dhashay ku dhawaad ​​2006, wuxuu jecel yahay inuu duulo oo uu kafaalo qaado dadka kale, gaar ahaan duuliyeyaasha dheddigga. Bishii Sebtembar 2014, Mutungi wuxuu ka mid ahaa 39 duuliyeyaasha duullimaadyada ee Kenya Airways, marka la isku daro 530, waxayna ahayd kabtanka wadada Nairobi-Paris ee lagu fuliyay B7878. Waxay ka fekereysaa inay abuurto diyaarad u gaar ah, halkaas oo kala badh duuliyeyaasha ay haween noqon lahaayeen.
Noocyada Namibiyaanka: (E = M6) kuwan yar ee ardayda dugsiga sare ee Namibia waxay soo bandhigeen taleefan kaas oo la xidhiidha mowjadaha raadiyaha iyada oo aan la helin kaadhka SIM-ka iyo telefoon la'aan
Sep29 07: 40